Ụgbọ elu Hawaii ọhụrụ si Seattle, San Francisco na Los Angeles na ụgbọ elu Hawaii ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ụgbọ elu Hawaii ọhụrụ si Seattle, San Francisco na Los Angeles na ụgbọ elu Hawaii ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu Hawaii ọhụrụ si Seattle, San Francisco na Los Angeles na ụgbọ elu Hawaii ugbu a.
Ụgbọ elu Hawaii na-agbasa ọrụ otu ugboro kwa ụbọchị n'etiti Honolulu na Seattle na San Francisco, yana n'etiti Kahului, Maui na Los Angeles.
Ndị njem ezumike ugbu a nwere nhọrọ ndị ọzọ iji soro ezinụlọ jikọọ ọzọ ma ọ bụ gaa ezumike Hawaii.
Ụgbọ elu Hawaii na-agbakwunye ụgbọ elu ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị n'etiti agwaetiti ndị ahụ na US West Coast.
Ndị ọbịa na-eme njem n'etiti HNL na SEA ga-anụ ụtọ ọnụ ụlọ na nkasi obi nke ụgbọ elu Airbus A330 sara mbara nke Hawaii.
Hawaiian ụgbọ na-enye ndị njem ezumike ọtụtụ nhọrọ iji nwetaghachi ezinụlọ ma ọ bụ gaa ezumike Hawaii yana ụgbọ elu ndị ọzọ anaghị akwụsị akwụsị n'etiti agwaetiti na US West Coast.
Iji gboo mkpa ezumike a tụrụ anya ya, Hawaiian ụgbọ na-agbasawanye ọrụ otu ụbọchị n'etiti Honolulu (HNL) na Seattle (SEA) na San Francisco (SFO), yana n'etiti Kahului, Maui (OGG) na Los Angeles (LAX), yana ụgbọ elu ndị a:
Gbọ elu Mba Nsoro Usoro ezumike* Ụbọchị mgbakwunye ezumike Est. ỌpụpụTime Est. mbataTime
HA 27 SEA-HNL Ụgbọ elu 2 kwa ụbọchị 19-Nọvemba-21 ruo 21-Nọvemba-2127-Nọvemba-21 ruo 29-Nọvemba-2117-Dec-21 ruo 5-Jan-22 8: 00 12: 15
HA 28 HNL-SEA Ụgbọ elu 2 kwa ụbọchị 18-Nọvemba-21 ruo 20-Nọvemba-2126-Nọvemba-21 ruo 28-Nọvemba-2116-Dec-21 ruo 4-Jan-22 21: 45 5: 30
HA 55 LAX-OGG Ụgbọ elu 2 kwa ụbọchị 19-Nọvemba-21 ruo 21-Nọvemba-2127-Nọvemba-21 ruo 29-Nọvemba-2117-Dec-21 ruo 5-Jan-22 12: 05 15: 45
HA 56 OGG-LAX Ụgbọ elu 2 kwa ụbọchị 18-Nọvemba-21 ruo 20-Nọvemba-2126-Nọvemba-21 ruo 28-Nọvemba-2116-Dec-21 ruo 4-Jan-22 22: 00 5: 00
HA 54 HNL-SFO Ụgbọ elu 1 kwa ụbọchị Mon-Thur2 ụgbọ elu kwa ụbọchị Fri-Sun 18-Dec-21 ruo 9-Jan-22 13: 15 20: 30
HA 53 SFO-HNL Ụgbọ elu 1 kwa ụbọchị Tue-Fri2 ụgbọ elu Sat-Mon 19-Dec-21 ruo 10-Jan-22 8: 00 11: 45
* Ụzọ niile edepụtara na-arụ ọrụ otu ugboro kwa ụbọchị tupu mgbakwunye ezumike
Ndị ọbịa na-eme njem n'etiti HNL na SEA ga-anụ ụtọ ọnụ ụlọ na ntụsara ahụ nke nnukwu ahụ nke Hawaii Airbus A330 ụgbọ elu.
Hawaiian ụgbọ ga-eji ya dị jụụ na mmanụ ụgbọala na-arụ ọrụ warara-ahụ Airbus A321neo iji rụọ ụgbọ elu ndị ọzọ n'etiti LAX na OGG na HNL na SFO.
Ndị ọbịa niile na-aga agwaetiti Hawaii ga-agbasorịrị ihe omume mmemme Safe Travels steeti nke Hawaii chọrọ.